DAM: Gini bu Digital Asset Management? | Martech Zone
DAM: Gini bu Digital Asset Management?
Wednesday, February 15, 2012 Tuesday, May 10, 2016 Nicolás Jiménez
Njikwa akụ dijitalụ (DAM) nwere ọrụ njikwa na mkpebi ndị gbara gburugburu ingestion, annotation, katalọgụ, nchekwa, weghachite na nkesa nke akụ dijitalụ. Foto dijitalụ, ihe eserese, vidiyo na egwu gosipụtara ihe atụ-ebe nke njikwa ego mgbasa ozi (udi udi nke DAM).
O siri ike ime ka ikpe maka njikwa ihe onwunwe dijitalụ n’egosighi igosipụta ihe doro anya. Dịka ọmụmaatụ: ịzụ ahịa taa na-adabere na mgbasa ozi dijitalụ. Ma oge bu ego. Ya mere, ndị na-ere ahịa kwesịrị itinye oge dị ukwuu nke mgbasa ozi dijitalụ ha dị ka o kwere mee na ọrụ ndị ọzọ na-arụpụta ihe, uru na-erughị na nkwụghachi ụgwọ na nlekọta ụlọ na-enweghị isi.
Anyị maara nke ọma ihe ndị a. Ya mere, ọ bụ ihe ijuanya na, n'oge obere oge m na-etinye na ịkọ akụkọ nke DAM, ahụla m mmụba na-arịwanye elu nke mmata nke òtù DAM. Nke ahụ bụ ikwu na, ruo n'oge na-adịbeghị anya, òtù ndị a amaghị ihe ha na-efu.
A sị ka e kwuwe, ụlọ ọrụ na-ebido ịzụ ahịa maka DAM sọftụwia mgbe ọ matara na, nke mbụ, o nwere ọtụtụ ihe (gụọ "olu anaghị achịkwa") nke akụ dijitalụ na nke abụọ, na-emeso nnukwu ọbá akwụkwọ dijitalụ buru ibu na-ewe oke ogologo oge na-enweghị ekwenye zuru ezu uru. Nke a bụ eziokwu n'ofe ụlọ ọrụ dị iche iche gụnyere agụmakwụkwọ ka elu, mgbasa ozi, nrụpụta, ntụrụndụ, enweghị uru, nlekọta ahụike na teknụzụ ọgwụ.
Nke a bụ ebe DAM batara. Sistemụ DAM dị n'ụdị dị iche iche na nha, mana ha wuchara ha iji mee opekata mpe ihe ole na ole: ịchekwa, hazie na kesaa akụ dijitalụ. Yabụ kedu ihe ị kwesịrị ịma iji duzie ọchụchọ ndị na-ere gị?
AMdị nzipu DAM
Idgbasawanye ụlọ ọrụ na nso nso a wepụtara ezigbo akwụkwọ ọcha na-akọwa ọdịiche (na overlaps) n'etiti Software-as-a-Service (SaaS), on-ogige na oghere-emeghe DAM ngwọta. Nke a bụ ezigbo akụ iji chọpụta ma ọ bụrụ na ịmalite ịchọpụta nhọrọ DAM gị.
Ihe kachasị mkpa ịmara, bụ na nke ọ bụla n'ime okwu atọ a bụ ụzọ isi kọwaa DAM (ma ọ bụ sọftụwia ọ bụla, maka nke ahụ) dịka njirisi dị iche iche. Ha anaghị ekekọrịta onwe ha-ọ bụ ezie na ọ nweghị ihe gafere n'etiti SaaS na arụnyere arụnyere.
SaaS mmiri e gbochiri egbochi sistemụ na-enye mgbanwe n'ihe gbasara arụmọrụ na nnweta yana obere ụgwọ IT. Akụrụngwa na akụ gị na-akwado igwe ojii (ya bụ, sava dị anya). Ọ bụ ezie na onye na-ere DAM a ma ama ga-eji usoro nnabata nke dị oke nchebe, ụfọdụ ụlọ ọrụ nwere atumatu na-egbochi ha ịhapụ ụfọdụ ozi dị nro na mpụga ụlọ ọrụ ha. Ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ọrụ ọgụgụ isi gọọmentị, dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịmeghị SaaS DAM.
Mmemme arụnyere, n'aka nke ọzọ, dịcha "n'ụlọ". Ọrụ nke ụlọ ọrụ gị nwere ike ịchọ ụdị njikwa na mgbasa ozi nke nwere ike ịbịa site na ịdebe data na sava ọ dị na ụlọ gị. Ọbụna mgbe ahụ, ị ​​kwesịrị ịmara nke ọma na, belụsọ na ị na-akwado data gị na sava ndị dịpụrụ adịpụ, omume a na-ahapụ gị ohere ịnweta ihe egwu ụfọdụ ga-ahapụ akụ gị kpamkpam. Nke ahụ nwere ike ịbụ nrụrụ aka data, mana ọ nwekwara ike ịbụ ohi, ọdachi ndị na-emere onwe ha ma ọ bụ ihe ọghọm.
N'ikpeazụ, e nwere ihe na-emeghe. Okwu ahụ na-ezo aka koodu ma ọ bụ ụkpụrụ nke ngwanrọ ahụ n'onwe ya, mana ọ bụghị ma enwetara sọftụwia ahụ dịpụrụ adịpụ ma ọ bụ na igwe nke ụlọ gị. Ikwesighi ịdaba n'ọnyà nke ịdabere mkpebi gị na ma ihe mepere emepe ọ dị mma maka gị ma akwadoro ma ọ bụ tinye ya. Ọzọkwa, ị ga-ahụrịrị n'eziokwu ahụ na ịbụ onye mepere emepe na-emeghe sọftụwia na-abawanye uru ma ọ bụrụ na gị ma ọ bụ onye ọzọ nwere akụnụba iji wee hiwe mmemme ahụ.
Enweghị mkpa abụọ DAM chọrọ otu. ọ bụrụhaala na ị na-elekwasị anya n'ịchọta ihe ngwọta kachasị mma, ahịhịa ga-acha akwụkwọ ndụ n'akụkụ nke ọzọ.
Dị ka a ga - asị na ụdị dị iche iche dị na nnyefe ezughi ezu, enwekwara ọtụtụ atụmatụ atụmatụ ebe ahụ. Fọdụ ndị na-ere ahịa DAM dị mma karịa ndị ọzọ gbasara ijide n'aka na ha kachasị mma iji gboo mkpa gị pụrụ iche tupu ịnwa ịre gị na sistemụ ha, yabụ ọ dị mkpa karịa ka ị banye na ịchụ nta DAM gị yana nkọwapụta nke ihe achọrọ dị ka o kwere mee.
Ọbụna nke ka mma: mebie mkpa gị na ngalaba dị mma ma nwee ọmarịcha. Ikwesiri ịdekọba atụmatụ ọ bụla dị mkpa n'ihi iwu ọ bụla, iwu ma ọ bụ iwu ndị ọzọ na-achịkwa ahịa gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị.
Ihe ihe niile a na-eme bụ ijide n'aka na ị nweghị njedebe ole na ole na ị nweghị ike melite arụmọrụ nke arụmọrụ gị dịka o kwere mee ma ọ bụ ọtụtụ atụmatụ ị hụrụ na ị na-akwụ ụgwọ maka mgbịrịgba na whistles ị gaghị eme mkpa ma ọ bụ chọrọ iji.
Uru nke DAM
Iche echiche banyere uru nke imejuputa a sistemụ njikwa akụ dijitalụ na usoro nke “ịcha” akwụ ụgwọ ma ọ bụ “ịchekwa” oge dị nnọọ ezughị. Ọ naghị abanye n’obi etu DAM nwere ike isi metụta nzukọ na akụrụngwa gị.
Kama, chee maka DAM na usoro nke “nchighari.” Anyị na-ejikarị iji okwu ahụ eme ihe maka usoro DAM sọftụwia na-enyere aka ma na-emezi nchigharị nke akụ dijitalụ ọ bụla, mana (mgbe ejiri ya mee ihe n'ụzọ ziri ezi) ọ nwere ike inwe otu mmetụta ahụ na ọrụ, dollar na talent.
Were onye na-ese ihe atụ. Ya ma ọ bụ ya nwere ike ugbu a jiri 10 nke ọ bụla 40 awa na nyocha na-enweghị isi, ọrụ njikwa mbipute yana nhazi ụlọ akwụkwọ ihe osise. Tọlite ​​DAM na iwepụ mkpa maka ihe niile ahụ agaghị apụta na ị ga-egbutu oge nke onye mepụtara gị. Ihe ọ pụtara bụ na a ga-eji oge awa nke arụ ọrụ na-adịghị arụ ọrụ na-abaghị uru rụọ ọrụ ugbu a iji jiri ndị na-emepụta ihe na-eme atụmatụ ike: imewe. Otu ihe ahụ na-aga maka ndị ahịa gị, ndị ahịa ahịa, wdg.
Mma nke DAM abụghị na ọ na-agbanwe usoro gị ma ọ bụ mee ka ọrụ gị ka mma. Ọ bụ na ọ tọhapụrụ gị ịchụ otu usoro ahụ n'ụzọ siri ike ma mee ka ọrụ gị lekwasị anya karịa oge.
Tags: damnjikwa ihe onwunwe dijitalụgbasaagbasawanye ụlọ ọrụ
Nicolás Antonio Jiménez bụ onye nhazi ahịa na Widen Enterprises, onye na-eweta ọrụ igwe ojii na-eweta ọrụ njikwa akụ. Onwere uzo di iche-iche n’ire ahia, oru nta akuko, oru ndi na-achoghi oru, ikwado ndi nwere onwe nke ndi oru nta akuko na ikwalite ochichi onye kwuo uche ya.
Nka nke Ndị Ahịa Na-ada n’ Lovehụnanya